Izindaba - IKahuahua Mould's 2021 “Digital Management Improvement” Meeting Mobilisization and “Strategic Target Military Order” Oath Conference ibibanjwe kahle
Umhlangano Wokugqugquzela Kaihua Mould ka-2021 “Wokuphuculwa Kwezokuphathwa Kwedijithali” kanye neNgqungquthela Yesifungo “Yeqhinga Eliqondiwe Lamasu”
NgoMashi 2-3, 2021, umhlangano wokugqugquzela iKaihua Mold "Digital Management Improvement" kanye nomhlangano wesifungo we "Strategic Target Military Order" wabanjelwa eNdlunkulu yaseHuangyan naseSanmen Factory. Bangaphezu kuka-1 000 abasebenzi abebehambele lo mhlangano.
Umhlangano Wokugqugquzela “Ukuphathwa Kwedijithali”
Ekuqaleni komhlangano, uSihlalo uLiang Zhenghua wabelane nawe:
Ngo-2020, iminyango ehlukene yamafektri amabili aseHuangyan Sanmen izogxila emibonweni eqondisayo "yekhwalithi ephezulu, ukusebenza kahle kakhulu, kanye nomjikelezo omfushane", ezosebenza kuphrojekthi ngayinye eyimpumelelo, futhi izokhanya ngemiklomelo yokuhlonipha.
Ama-oda ngo-2020 enyuke ngo-40.37% unyaka nonyaka
Inani lokukhipha lika-2020 lenyuke ngo-13.77% unyaka nonyaka
Angu-668 amacala wokuthuthuka we-KMS
Inani lamacala wokuthuthuka we-1184 KMVE
I-2021 unyaka wokuphucula ukuphathwa kwedijithali kaKaihua. Yonke iminyango kumele igxile entuthukweni esezingeni eliphakeme, ithuthukise ngokuphelele ukuphathwa kwedijithali kwebhizinisi, futhi igcwalise izinkomba zango-2021, futhi izuze lezi zidingo ezinhlanu ezilandelayo:
1. Kumele siphikelele kwikhwalithi kuqala
2. Kumele ibe yikhasimende futhi inikeze amakhasimende izixazululo ezihlelekile
3. Izindleko nezindleko zenkampani kumele zehliswe
4. Ukubekwa emthethweni kumele kulandelwe
5. Kuyadingeka ukwenza ngcono izinga lokwaziswa nokusheshisa ukuthuthukiswa kokufakwa kwedijithali
Kule ngqungquthela, inkampani yancoma amaqoqo asele kanye nabasebenzi abavelele abakhethwe yiminyango ehlukene ngo-2020. Kuklonyeliswe imiklomelo ehlanganyelwe yonke engu-5 nemiklomelo engu-11 ngazodwana, kwathi bangu-54 sebonke abantu abathathe inkundla ukuthola le miklomelo.
I-ajenda yesibili yale ngqungquthela ukukhishwa komhlangano wesifungo "we-target target military order".
Iphini likamongameli omkhulu wenkampani nabaphathi bomnyango ngamunye bathatha isifungo basayina imiyalo yamasosha ngamunye ngamunye, kwathi uSihlalo uLiang Zhenghua wanikeza amafulegi umnyango ngamunye.
Isigubhu sempi sesizwakele, nomyalelo wamasosha usubekiwe. I-oda lempi lingumgomo, kepha futhi nesithembiso. Bonke abasebenzi bazothwala umthwalo emahlombe abo ngokungagudluki futhi bawafake ezenzweni, ukuze amagama kumele abe yizenzo futhi nezenzo kufanele ziqine!
Ukukhishwa Kwengqungquthela Yesifungo "Yenhloso Yamasu Wamasu"
Ubusika sebuphelile, umthala uyakhanya
Ngiyabonga mndeni wakwaKaihua
Ngo-2020, sizoba semkhunjini ofanayo, sibambene ngezandla
Sizoqhubeka ngonyaka ka-2021
Ungakhohlwa inhloso yasekuqaleni futhi uqhubekele phambili ngesibindi